Meesha ugu adag ee wax lagu barto dunida oo dhan - BBC News Somali
Xataa burburka Bariga magaalada Quuta arday ayaa diiday in ay waxbarashada joojiyaan
Dagaalka dabada dheeraaday ee Suuriya ayaa horseeday muuqaallo badan oo tilmaaamaya burbur iyo dhibaatooyin kale oo badan.
Laakiin iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan haddana bariga magaaalada Quuta waxaa ku nool dhallinyaro wali isku dayaya in ay wax bartaan oo haddana maareeyaan qorshaha mustaqbalkooda.
Ardaydaasi waxay ku tiirsan yihiin jaamacadaha Online-ka ku bixiya shahaadada Dhigriiga, si ay arrintaas ugu suurtaagashana waxay u baahan yihiin koronto iyo khad internet.
Maxamuud oo labaatan jir ah kuna nool Bariga magaalda Quuta ayaa culuunta combiyuutarka oo dhigrii ah ka baranaya jaamacadda University of People ee dalka Maraykanka ku taalla, taas oo waxbarasho dhigrii ah u fidiso dadka aan si caadi ah waxbarasho sare u heli karin.
"Duqayn xad dhaaf ah"
Fasallada dugsiyada sare wuxuu ku qaatay Bariga Quuta iyadoo ay sannado badan halkaas ka socdeen dagaal sokeeye, balse ma jirin jaamacad uu ka sii wato tacliinta sare.
Guri dhulka lala simay oo ku yaalla Bariga Quuta, waxaa daganaa arday guriga ka maqnaa oo sidaas ku badbaaday
Markii aan dhameeyay dugsiga sare ma heli karin jaamacad aan culuunta kombiyuutarka oo dhigrii ah ka dhigto, sida uu BBC-da u sheegay.
In aad waxbarato oo dhigrii qaadato waa arrin muhiim u ah in aad horay u socoto, sida uu sheegay Maxamuud, waana astaan muujinaysa in mustaqbalku wanaagsan yahay ayuuna hadalka sii raaciyay.
"Waxay ila tahay waddadaas ayaan cagta saaray" ayuu yiri.
Jaamacaddan Dadka ama The University of the People ayaa u taagan dadka aan fursad kale oo jaamacad haysanin. Waxaana adeegsan jiray ardayda Suuriya markii uu socday dagaalkii magaalada Xalab, markaas oo jaamacaddii magaalada la duqeeyay.
Ilmo laga badbaadinayo meel ay duqayn ka dhacay intii ay go'doomintu socotay
Jaamacaddu waxay ardayda u suurtagalisaa in ay helaan shahaado dhigrii ah oo la aqoonsan yahay oo ay online-ka ku dhigteen, waxaana arrintaas gacan ka gaysta shirkadda Google iyo Gates Foundation, waxaana ka shaqeeya bareyaaal mutaadawiciin ah iyo macalimiin hawlgab ah.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa Bariga Quuta ku tilmaamay "caddaabkii dunida" jaamacaddana waxaa daruusta wali ka qaata 10 arday.
'Badqab' iyo 'Rajo'
Laakiin sidee qof si wanaagsan wax ugu baran karaa iyadoo ay dagaallo sidaas oo kale ah socdaan.
Dabcan dhibaatooyin dhanka maskaxda ah ayay reebayaan, sababtuna waa waxa agagaarkanaga ka dhacaya, ayuu yiri Maxamuud.
"Marka duqaymaha dhanka cirka ah iyo gantaalladu ay sii cuslaadaan waxa kali ah een ka fikirno waa badqabkanaga.
Marka ay yaraha roonaatana xataa wakhti koobanba ha ahaatee waxaan dib ugu laabanaa in aan ka fikirno shaqooyinkanaga, waxbarashadanada iyo waxa aan samayn doono mustaqbalka.
"Shaqsiyan waxaan qabaa caqabadaas laftirkeeda ayaa dhibaato dhanka maxkasda ah.
Dad guuraya ka dib markii toddobaadkii hore uu weerar dhacay waxaana goobta ka baxaya qiiq
"Laakiin in aad haysato fursad aad wax ku barato adiga oo ku nool goob go'doonsan waa "rajo" naadir ah.
Waxaan doonayaa in aan qalinjabiyo oo aan dhigrii qaato. Anagga oo go'doonsanna fursad wayn ayay noo tahay. Ardaydana rajo ayay galinaysaa.
Waana ka go'naansho la taaban karo.
Ninkii lacag ka haystay $50 doolar oo lagu abaalmariyay nus milyan
"Niyad baan u hayaa in aan wax barto, waxaana doonayaa in aan sii wado waxbarashada. Haddii aan fursad helana waxaan doonayaa in aan qayb ka noqdo qorshaha dalka dib loogu dhisayo," ayuu yiri Maxamuud.
'Maanta dhiig badan ayaa daatay.
Laakiin arrintu ma sahlana
Tan iyo bishii hore "xaaladdu way adkayd balse waa la maarayn karay" si uu waxbarashada u sii watana wuxuu ku tiirsan yahay koronto iyo jananeetar.
Maryan waa ardayad wax ku akhrisanaysa shamac mar uu dagaal ka socday Xalab
Waxyaabaha aan u baahanahay sida korontada, internetka iyo waxkaste oo aan u baahanahay way adag tahay in la helo sababtuna waa go'doominta, mararka qaarkoodna lamaba heli karo.
Sidaa iyadoo ay jirtay haddana xaaladdu way ka sii dartay.
Dhammaan qoysaskii daganaa dhismihiiisa waxay u wareegeen qaybta hoose si ay gabaad uga dhigtaan qaybta dhismaha ugu hoosaysa, sida uu sheegay.
Majed oo ah arday kale oo dhigta culuunta kombiyuutarka ayaa sheegay in gurigooda lagu burburiyay duqaymo ay diyaarad gaysatay. Wuxuuna la daalaa dhacayaa internet aan la isku halayn karin iyo meel uu ka dabaysto taleefankiisa.
Iyadoo arday badan oo dunida wax ka barata ay imtixaanno isu diyaarinayaanna wuxuu toddobaadkii hore soo diray fariin isaga oo yiri "maalin dhiig badan daatay ayay maanta noo ahayd".
Talaadadii wuxuu Majed yiri waxay u muuqataa in heshiiskii xabbad joojintu uu shaqaynayo.
Qoysas ayaa toddobaadkii hore ka soo muuqday gabaadyo dhulka hoostiisa ah
Laakiin cuntada iyo korontada ayaa gabaabsi ah, aad ayayna qaali u yihiin, dadkuna waxay u wareegeen goobo ku meelgaar ah oo ay bambooyinka kaga gabadaan.
Wuxuu u baqayaa jiilka soo socda ee Suuriya in ay waayaan waxbarasho ayna ku dhacaan "jahli iyo in lagu shaqaysto iyaga oo yaryar".
Ayeeyo 91 sano jirta oo jaamacad dhamaysay
Macallin jaamacad oo xabsi daa'in lagu xukumay
Halka ardayda kale ay ka tirsanayaan maalmaha uga dhiman imtixaanka kama dambaysta ahna, isagu wuxuu tirinayaa dadka dhintay.
Laakiin Majid wuxuu sheegay in uu wali "rajo" leeyahay uuna eegayo mustaqbalka. Wuxuuna doonayaa in uu qaato shahaadada ugu sarraysa ee jaamacadda ee PhD.
"Noloshu waa in ay socotaa, dagaalkuna ma aha in uu arrintaas naga hor istaago, ugu dambaynna anaga ayaa ah kuwa dalka dib u dhisi doona ee dhaawaca soo gaarayna dhayi doona.
"Waxaan rumaysanahay waxbarashada ayaa gacan naga siindoonta in aan mustaqbalkanaga dhisno.
Imisa waddan ayaa heysata hubka niyukliyeerka meeqa xabbo ayaase taalla adduunka?
Ukraine oo baadigoob ugu jirto hub uu Ruushka si weyn uga baqo
Xaaska madaxweynaha Ukraine: 'Waxaan qaylo kusoo kacay ninkeyga oo aan sariirta ila jiifin'